Dhaabbilee Habasha Oromoo irratti dulii isaan labsan dura dhabatamu qaba.
Dulii Oromoo irratti wagga kana gutuu deema kan ture yamuu ta’u. Duran dursan Obbo Bulcha Demekssa fi Prof. Bayen Phexiros Dhaabbilee Habasha biyya jiran ijoole nafxanyatti nun jedhan jechun dulaa egalan. Tesfaye Gebreab yaakaa Oromoo irratti siirnaa nafxanyan raawwatama ture Kitaaba isaa keessa Galchuun ammoo Oromoo fi Tesfaye Geberab irratti dulaa wali irra hin cinee akka geggeessan godhe. Jawar Mohammed Ani dura Oromoo dha malee Ethiopia mitti jechun isaa ammoo Habashoota abida itti qabsise, kun garu Nafxanyootaa akkas arsuu hin qabu ture. Neo-Menelikoon Guyyaa du’aa Menelik akka kabajamuu Samayawi (Blue) Partiin labsuu isaan wal qabatee obbo Bulcha Demekssa Radiyoo Germany irratti Menelikn Mormuun isaani Habashoon Oromoo fi Obbo Bulcha xiqeesuu egalan. Kana hunda Oromoon caaliisuun dabarse, garu ijoolee Oromoo wal gurmeessan mana Paltak banani akka mari’atan isaan dirqisise.
Labsii lola fi tufii Oromoo irratti geggefaa turee kana kan iffa basee ammoo Ibsa Moresh Waganee Website fi Raadiyoo Hibir irratti dabarsan keessatti jechoon Tekle Yeshaw dubataman Oromoo hunda obsa dhorke. Menelikn Dhadeesuu fi Konsertti Teddy Afro Oromiya gutuu keessatti gaggesuuf ibsamuun ammoo Oromoo irratti tufiin deemuu hamaa ta’uu isaa daran ifaa basee. Neo-Menelikoon yakkaa abootiin isani Oromoo irratti raawwatanf dhifma jeechuu mannatti Moresh Wagene (Gala Gaday) yakkaa Oromoo irratti raawwatamee siirri ta’uu ibsuun, Oromoon lafa tokko iyuu Ethiopia keessa akka hin qabne ibse. Barreefama Moresh (Gala Gaday) facasee fi Median Habasha hundi Paltak Room Debtara, Abba Mela, Qale, Ethiopia karenti Affärs, website fi Esat TV jedhaman irratti Oromoo debisan garboonfachuu tarsimoo isani ta’uu ibsatan. Moresh (Gala Gaday) fi Leeliftoon Menelik hund Abootiin isaani waraa bara Menelik fi Haile Silasee Oromiyyatti raamadaman Oromoo ajjessa turan dha. Goocha Menelik Oromoo irratti raawwatee ni xiiqatee Oromoon Ethiopia keessa ba’uu qaba, Oromoon garba Amharatti jechun dubatan.
Oromoo Laga fi Amantan, Ilaachaa siyaasaa fi umuriin utuu wal hin qoodin bakka tokkotti mari’achuu egalan. Ijoolen Oromoo Haalaa Neo-Menelikoon deemsisaa jiran kun malif yaadamee? jechuun mani marii Oromoo “Menelik Genocide against Oromo and Othe Ethiop’s” Dr. Getachew Jigi Demekssa ibsaa fi xinixalaa siyaasaa gaafate. Xinxala isaani keessat “Habashoon bara Tewodros, Yohanis, Menelik, Haile Silasee, Dargi fi TPLF Yakkaa duguga sanyi Oromoo irratti raawwaachuu isaan ibsuun, Amaahar Gondor fi Gojam jiru akkumaa Oromoon jireenya gadadoo keessa kan jiratu fi Oromoo irratti hameenya tokko ilee kan hin qabne ta’uu isaa” ibsan. Olol fi Tufii Oromoo irratti deemsifama jiru ammoo Amhaaran utuu hin tane Nafxanyoota Siirna Menelik fi Hailee silasee keessatti Humna Qaween lafaa Oromoo qabatan turan ta’uu isaa ragaa waliin wal qabsisan xinxala garii kenan. Rakko Oromootti geesisa kan jiran, Ijoolee Nafxanyoota Humnan lafa Oromoo qabatan fi waraa Oromoo Hammachiisa, Gudiifachaa fi fudha fi heeruman wal makatan Neo-Menelik ta’uu isaan saxilan jiru. Oromoon baroota darbee keessa lalafuun isaa Neo-Menelikoon akka nu tufatan godhe jira. Dhabbilee Oromoo waan faca'aanf waan barbanee gochuu ni dandeenya jechuun. Tufii Oromoo irratti qaban agarsisaa jiru kana ammoo Oromoon tokkumaan Neo-Menelik Nafxanya Habasha dura dhabachuu qabna jechuun Dr. Getachew Waamiicha Oromoof godhan Ijoolee Nafxanya (Habashoota ) akka abiddaa isaan guggube. Media Habasha hund wagaa 2014 namaa kana irratti du’aa labsa jiru. Garuu, waan Tekle Yeshaw Oromoon jeedhe fi median Habasha dubatu ammoo akka jeecha waaqaayyootti ilaaluu, Habashoon jiba isaan Oromoo irra qaban, Obbo Bulcha Demekssa, Tesfaye Geberab, Jawar Mohammed fi Dr. Getachew Jigi irratti jeecha isaan fayyadaman qofan eenyummaa isaan mul’isu. Oromoon diinoota kana waliin dubachuu, Harriiroo ummachuu fi waliin jirachuu yaaluun of xiqeesuu irraan kan hafe bu’aa inni Oromoof fiduu hin jiru.
Oromoon biyyaa keessaa jiruu media akka gariitti argachuu dhabnuu ilee sochii Neo-Menelik biyyaa keessaatti adeemsisaa jira sirritti hordofa jira. Baratoon Oromoo biyyaa keessaa Tedy Afro fi Bedele Biirra irratti falmii isaan geggesan boonsa ture. Habashoon kara media isaani hundan lola Oromoo irratti labsan jiru. Oromoon ammoo gochaa duggugaa sanyii Neo-Menelikoon nuu irratti raawwachuuf deeman of irra dhorkuuf golii Oromiyaa hundi qopha’uu qaba. Mani Marii Ijoolee Oromoo “Menelik Geneocide against Oromoo fi others Ethiops” jedhu Saganta Marii isaan qoopheefatan dargaggoon Oromoo tokko tokko isaa irratti mari’achuun qabataman hojii irra olchuuf Topic Marii kana fudhatan jiru. Dhaabbilee Oromoo fi Haawwasi Oromoo hundi caalise ilaaluu utuu hin tanee sabonumman soda tokko malee gadii ba’aan afaan guutan diina falmachuu qabu. Dr. Getachew Jigi akkuma Paarlaamaa Ethiopia keessatti Melese Zenawi dura dhabatee soda tokko malee falmatuu ammale biyya alaatti Neo-Menelik dura dhabatee lammii isaaf falmachuun isaa nu gamachisee jira. Beektoon Oromoo iyaa habasha utuu hin sodatiin akka onnen falmatan isin gaafana.
Neo-Menilk Oromiyaa keessa basuuf, Siida Menelik Finfinnee irra Buqisuuf, Manane Barumsa, Karaa, Gamoo fi Riiqiichaa(dildilaa) Maqaa Menelikn Oromiyaa keessatti waamaman jijjiruuf, Orthodoks churchun Oromiyaa keessa jiru, Afaan Oromoon akka saganta ishee geggefatuu fi ittigaafatamuman ishee ilee Oromiyaaf akka ta’u, Dhabbilee Siyaasaa Neo-Menelik lafa Oromo keessa akka hin sochonee, Nafxanyoon siirna Menelik fi Hailee Silasee lafa fi qabeenya humnan meeshaa siirna sana keessa qabatan gadii dhisan akka ba’aan, Siirinii Gadaa, Waqeefannaa fi Irreechii Oromoo siirna Menelikn dhorkamee atataman akka hojii egaluuf fi waggaa waggan Ayyaana Biyyooleessa ta’ee akka kabajamuu, Afaan Oromoo siirna Tewodors, Yohanis, Menelik, fi Haile Silasee keessa humnan dhorkamee amma haalaa duree tokko malee akka afaan hojii biyooleessa ta’uu, Siirna Nafxanyaa falmachuun Oromoon mana hiidha jiru akka gadii dhiifaman, Heera Federala Keyata 49 lakoofsa 4 irratti Oromiyaan Finfinne irra fayyida argachuu qabduu Heeran murta’ee Oromiyyan wagoota 23 darban argachaa hin turee kanaafuu seeri kun erga cabee Finfinnen Oromiyaa jalatti deebitee akka bultuu, Yunivarsitiiyn addaa, afaan fi seenaa Oromoo fi ummatoota cunqurfama siirna Nafxanya Habasha jalaa turan qooratuu seeran akka dhabatuu gochuuf dargaggoon Oromoo tartiiban irratti falmachuuf murtefanee jira.
Neo-Menelik fi diina nu samaa jiru lamshesuuf Dargagaggoon fi uummaatti Oromoo gurma’uun dirqama. Tekle Yeshaw Oromoon Ethiopia kessa lafa hin qabuu erga jeedhe, Oromoon diina Oromiyya keessa jiruu Neo-Menelik irratti ugura ka’uun lola tokko malee Oromiyya keesa ari’achuu ni danda’aama. Dhaadannon keenya bara 2014:- Nu haa ga’uu garbuman!, Nu ga’aa Habasha Amanun!, Nu ga’aa nama duba dhabachuun!, Nu ga’aa Nafxanyati ajjajamun!, Nu ga’aa biyya keenyatti rebamun!, Nu ga’aa biyya keenyatti horman hiidhamun!, Nu ga’aa utuu ilaalu qabeenya keenya samamun!, Nu ga’aa biyya keenya irra ari’amnee biyya hormatti ilee dararamun!, Neo-Menelik (Habasha) Amanuu fi waliin hojjechuu dhiisuu!, Diina irra bituu fi itti gurguruu dhiisuu, Hoteella diina lixee nyachuu dhiisuu, Diina Oromootti firomuu dhiisuu, Konkoolataa diinan deemuu dhiisuu!; Diinatti heerumuu fi diina fuudhuu dhiisuu!, Diinatti kara argiisisu dhiisuu!, Diinatti lammi kee saxiluu dhiisuu!, Afaan diinan dubachuu dhiisuu!, Diina waliin ijaramuu dhisuu!, Diina waliin sagaduu yookiin waqeefachuu dhisuu!, Diina Oromoo keeesaa humana warana qubatee Oromiyaa keessa basuu!, Diina Lafa keenya irra nu buqisuu, biyya nu ari’atuu, Shamaran keenya Arabati gurguratu, Qabeenya keenya samee samisisuu waliin harirroo qabauu dhiisuu!.
Oromoon Abbaa Biyyati !!!
Amajji 4, 2014